လီဗာပူး မှာလို မကစားဘူးဆိုတဲ့ စကော့တလန် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး မှာလို မကစားဘူးဆိုတဲ့ စကော့တလန် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
လီဗာပူး မန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့ က စကော့တလန် ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် အန်ဒီရောဘတ်ဆန်ကို ဆက်လက် ယုံကြည်မှု ရှိရန် တောင်းဆို သွားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး ဘယ်နောက်ခံလူရဲ့ စကော့တလန် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲတွေမှာ ရုရှား ၊ ဘယ်ဂျီယံ အသင်းတို့ကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး စကော့တစ်ခ်ျ ပရိတ်သတ်တွေက နိုင်ငံရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ရာထူးကို လက်ခံ ရယူခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ရောဘတ်ဆန်ဟာ လီဗာပူးက ခြေစွမ်းလိုမျိုး မပြသ နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဝေဖန် နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အန်ဖီး နည်းပြက စကော့တလန် ပရိတ်သတ်တွေ အနေနဲ့ သူ့အသင်းခေါင်းဆောင် နဲ့ မန်နေဂျာ စတိကလပ်ရဲ့ အသင်းကို တိုးတက်ဖို့ အတွက် အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ဂျာမန် နည်းပြက “လူတွေ ပြောနေကြတာကို ကျွန်တော် တွေ့ပါတယ်။ ‘အန်ဒရူးဟာ ငါတို့အတွက် လီဗာပူး အတွက် လုပ်ပေးသလိုမျိုး မလုပ်ပေးဘူး’ ဒါမျိုးတွေပါ။ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် ကတိပေးနိုင် တာကတော့ အကယ်၍ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် နှလုံးသားကြီးကြီး နဲ့ကစားပေးတယ် ဆိုရင် စကော့တလန် အတွက် ကစားပေးတဲ့ သူ့နှလုံးသားက ၃ ဆ ပိုမို ကြီးမားမှာပါ။ ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမား တစ်ဦးကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် သွားရမလဲ ဆိုတာကို စကော့တစ်ခ်ျ လူထုထံ ပြောဖို့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ ဒီလို ပြသနာ ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ ကစားသမားရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာမှာ ပြသနာ ရှိနေ ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် စကားပြောသွား မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စကော့တလန် ၊ မီဒီယာ ၊ လူတွေ အနေနဲ့ အနည်းငယ် စိတ်အေး လက်အေး ထားရမှာပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ရုရှားကို အနိုင်ရဖို့ မျှော်မှန်းထားခဲ့ ကြတယ်လို့ ကျွန်တေ်ာ ကြားပါတယ်။ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲ ရောက်လာ ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး မေးခွန်းကတော့ ‘ဘာကြောင့်လဲ?’ ဆိုပြီးတော့ပါ။ သူတို့မှာ စကော့တလန်ထက် ဘောလုံးသမား ငါးသန်းလောက် ပိုများပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘယ်ဂျီယံ? ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ၉၅% ဟာ သူတို့နဲ့ ကစားရင် ရှုံးမှာပါ။ စကော့တလန်ဟာ အဘာဒင်း ၊ ဂလက်စကို နဲ့ အီဒင်ဘက် တို့ထံက ကမ္ဘာ့အဆင့် ကစားသမား အယောက် ၂၀ ရှိဖို့ မလုံလောက် သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ ကြီးမားတဲ့ နှလုံးသား ၊ တိုက်ပွဲဝင် စိတ်ဓာတ် ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစစ် နဲ့ ဂိုးသွင်း နိုင်စွမ်းတွေ အမြဲ ရှိပါတယ်။ လီဗာပူးမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အသင်းကို ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်မယ့် အခြေအနေ တစ်ခု ဖန်တီး ပေးရပါတယ်။ စကော့တလန်လည်း ဒီလိုမျိုး လုပ်သွား ရပါမယ်။ မျှော်လင့် ထားမှုတွေဟာ အရမ်းကို မြင့်မားလွန်း နေပါတယ်။ ရော်ဘိုကြောင့် မနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နောက်ခံလူ တစ်ဦး အနေနဲ့ တစ်ဦးတည်း ပွဲကို အဆုံးအဖြတ် ဖြစ်အောင် ကစားလို့ မရပါဘူး။ ဒါဟာ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
သူလုပ်စရာလည်း မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အသင်းမှာ အခြား လူကောင်းတွေ ရှိနေလို့ပါ။ ဂျွန်မက်ဂင်း..ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ ကစားသမားလဲဗျာ။ စနော့ဂရပ်..အံ့ဖွယ် ကစားသမားပါ။ စကော့မက်တိုမီနေး ဆိုရင်လည်း ကြီးမားတဲ့ အလားအလာ ရှိနေသူပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ပေးကစားလိုက်ပါ။ မန်နေဂျာကို ကစားဟန်တစ်ခု..စကော့တစ်ခ်ျ ကစားဟန် ဖန်တီးဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် မန်နေဂျာ အပေါ် ဖိအား မပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ချက်ချင်းကြီးတော့ အသင်းကို တောက်ပအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
သူတို့ကို ရှင်သန် တိုးတက်ဖို့ အတွက် အချိန် ပေးရ ပါမယ်။ စကော့တလန် ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲမှာ ကစားခဲ့ပြီး ကတည်းက နှစ် ၂၀ လောက် စောင့်နေ ခဲ့ရတာပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော် လီဗာပူးကို စရောက် လာခါစ အချိန်တုန်း ကနဲ့ လုံးဝ တူညီ ပါတယ်။ လူတိုင်းက ကျွန်တော်တို့ ဆုဖလား ရယူ ပေးရမယ်လို့ ပြောကြ ပါတယ်။ အကယ်၍ လူတွေက ကျွန်တေ်ာတို့ အပေါ် ယုံကြည်မှု မထား ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘာ အခွင့်အရေးမှ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ထောက်ခံ အားပေး ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ တိုးတက်ဖို့ အတွက် အချိန်ပေး ခဲ့ကြ ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လီဗာပူး မှာလို မကစားဘူးဆိုတဲ့ စကော့တလနျ ပရိတျသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှကေို တုနျ့ပွနျပွောဆိုလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့
လီဗာပူး မနျနဂြော ယာဂနျကလော့ က စကော့တလနျ ပရိတျသတျတှေ အနနေဲ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ အနျဒီရောဘတျဆနျကို ဆကျလကျ ယုံကွညျမှု ရှိရနျ တောငျးဆို သှားခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူး ဘယျနောကျခံလူရဲ့ စကော့တလနျ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ခွစေဈပှဲတှမှော ရုရှား ၊ ဘယျဂြီယံ အသငျးတို့ကို ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ပွီး စကော့တဈချြ ပရိတျသတျတှကေ နိုငျငံရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ ရာထူးကို လကျခံ ရယူခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး ရောဘတျဆနျဟာ လီဗာပူးက ခွစှေမျးလိုမြိုး မပွသ နိုငျခဲ့ဘူးလို့ ဝဖေနျ နကွေပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အနျဖီး နညျးပွက စကော့တလနျ ပရိတျသတျတှေ အနနေဲ့ သူ့အသငျးခေါငျးဆောငျ နဲ့ မနျနဂြော စတိကလပျရဲ့ အသငျးကို တိုးတကျဖို့ အတှကျ အခြိနျပေးဖို့ လိုအပျတယျလို့ ဆိုသှားပါတယျ။
ဂြာမနျ နညျးပွက “လူတှေ ပွောနကွေတာကို ကြှနျတျော တှပေ့ါတယျ။ ‘အနျဒရူးဟာ ငါတို့အတှကျ လီဗာပူး အတှကျ လုပျပေးသလိုမြိုး မလုပျပေးဘူး’ ဒါမြိုးတှပေါ။ ခငျဗြားတို့ကို ကြှနျတျော ကတိပေးနိုငျ တာကတော့ အကယျ၍ သူဟာ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ နှလုံးသားကွီးကွီး နဲ့ကစားပေးတယျ ဆိုရငျ စကော့တလနျ အတှကျ ကစားပေးတဲ့ သူ့နှလုံးသားက ၃ ဆ ပိုမို ကွီးမားမှာပါ။ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမား တဈဦးကို ဘယျလို ကိုငျတှယျ သှားရမလဲ ဆိုတာကို စကော့တဈချြ လူထုထံ ပွောဖို့ဟာ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အလုပျ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နိုငျငံ တျောတျောမြားမြားမှာ ဒီလို ပွသနာ ရှိပါတယျ။
အကယျ၍ ကစားသမားရဲ့ စရိုကျလက်ခဏာမှာ ပွသနာ ရှိနေ ခဲ့မယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျော စကားပွောသှား မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုမြိုး မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ စကော့တလနျ ၊ မီဒီယာ ၊ လူတှေ အနနေဲ့ အနညျးငယျ စိတျအေး လကျအေး ထားရမှာပါ။ လူတိုငျးလူတိုငျးဟာ ရုရှားကို အနိုငျရဖို့ မြှျောမှနျးထားခဲ့ ကွတယျလို့ ကြှနျတျော ကွားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ ခေါငျးထဲ ရောကျလာ ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး မေးခှနျးကတော့ ‘ဘာကွောငျ့လဲ?’ ဆိုပွီးတော့ပါ။ သူတို့မှာ စကော့တလနျထကျ ဘောလုံးသမား ငါးသနျးလောကျ ပိုမြားပါတယျ။
ပွီးတော့ ဘယျဂြီယံ? ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ၉၅% ဟာ သူတို့နဲ့ ကစားရငျ ရှုံးမှာပါ။ စကော့တလနျဟာ အဘာဒငျး ၊ ဂလကျစကို နဲ့ အီဒငျဘကျ တို့ထံက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကစားသမား အယောကျ ၂၀ ရှိဖို့ မလုံလောကျ သေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့မှာ ကွီးမားတဲ့ နှလုံးသား ၊ တိုကျပှဲဝငျ စိတျဓာတျ ၊ ကောငျးမှနျတဲ့ ခံစဈ နဲ့ ဂိုးသှငျး နိုငျစှမျးတှေ အမွဲ ရှိပါတယျ။ လီဗာပူးမှာ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ အသငျးကို ကောငျးကောငျး ကစားနိုငျမယျ့ အခွအေနေ တဈခု ဖနျတီး ပေးရပါတယျ။ စကော့တလနျလညျး ဒီလိုမြိုး လုပျသှား ရပါမယျ။ မြှျောလငျ့ ထားမှုတှဟော အရမျးကို မွငျ့မားလှနျး နပေါတယျ။ ရျောဘိုကွောငျ့ မနိုငျတာ မဟုတျပါဘူး။ ဘယျနောကျခံလူ တဈဦး အနနေဲ့ တဈဦးတညျး ပှဲကို အဆုံးအဖွတျ ဖွဈအောငျ ကစားလို့ မရပါဘူး။ ဒါဟာ လုံးဝ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
သူလုပျစရာလညျး မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အသငျးမှာ အခွား လူကောငျးတှေ ရှိနလေို့ပါ။ ဂြှနျမကျဂငျး..ဘယျလောကျ ကောငျးတဲ့ ကစားသမားလဲဗြာ။ စနော့ဂရပျ..အံ့ဖှယျ ကစားသမားပါ။ စကော့မကျတိုမီနေး ဆိုရငျလညျး ကွီးမားတဲ့ အလားအလာ ရှိနသေူပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ကို ပေးကစားလိုကျပါ။ မနျနဂြောကို ကစားဟနျတဈခု..စကော့တဈချြ ကစားဟနျ ဖနျတီးဖို့ အခြိနျပေးလိုကျပါ။ ဒါပမေယျ့ မနျနဂြော အပျေါ ဖိအား မပေးဖို့တော့ လိုပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ ခကျြခငျြးကွီးတော့ အသငျးကို တောကျပအောငျ မလုပျနိုငျပါဘူး။
သူတို့ကို ရှငျသနျ တိုးတကျဖို့ အတှကျ အခြိနျ ပေးရ ပါမယျ။ စကော့တလနျ ဟာ ကမ်ဘာ့ဖလား ပွိုငျပှဲမှာ ကစားခဲ့ပွီး ကတညျးက နှဈ ၂၀ လောကျ စောငျ့နေ ခဲ့ရတာပါ။ ဒါဟာ ကြှနျတျော လီဗာပူးကို စရောကျ လာခါစ အခြိနျတုနျး ကနဲ့ လုံးဝ တူညီ ပါတယျ။ လူတိုငျးက ကြှနျတျောတို့ ဆုဖလား ရယူ ပေးရမယျလို့ ပွောကွ ပါတယျ။ အကယျ၍ လူတှကေ ကြှနျတျောတို့ အပျေါ ယုံကွညျမှု မထား ခဲ့ဘူး ဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ဘာ အခှငျ့အရေးမှ ရှိမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့ကို ထောကျခံ အားပေး ခဲ့ပွီး ကြှနျတျောတို့ တိုးတကျဖို့ အတှကျ အခြိနျပေး ခဲ့ကွ ပါတယျ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။